Riyad Mahrez Oo Booqday Ciyaartooyda Liecester City | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Riyad Mahrez Oo Booqday Ciyaartooyda Liecester City
Published on August 10, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(10-8-2018) Laacibkii hore kooxda Leicester City Riyad Mahrez ayaa dib ula midoobay ciyaartooyda kooxda uu dhawaan ka soo dhaqaaqay,isagoo booqasho kooban ku tagay hotek-ka ay ka dageen magaalada Manchester ka hor kulanka furitaanka horyaalka England.
Liecester City iyo Manchester United ayaa caawa daaha ka rogi doona horyaalka dunida ugu xiisaha badan ee Premier League waxaana kulankaasi uu ka dhici doona garoonka Old Trafford ee masraxa riyada.
Riyad Mahrez ayaa booqasho ku tagay hotel-ka Leicester City ee magaalada Manchester Ka hor kulankooda Re Devills waxaana uu halkaasi kula kulmay qaar kamid ah ciyaartooyda kooxdiisa oo waqti ay wada qaateen.
Harry Maguire ayaa qeyb ka ahaa ciyaartooyd uu la kulmay laacibka Algeria Mahrez,Maguire ayaa saacadihii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga la filayay in uu ku wareegi doono Manchester,laakiin xidigaasi ayaa baaqi ku sii ahaaday garoonka King Power ee Liecester City ay ku ciyaarto.
Jose Mourinho ayaa damacsanaa in xidiga England uu ku xoojiyo saf difaaceedkiisa dhexe,kadib bandhig caalami ah oo xidigaasi uu ka sameeyay koobka aduunka isagoo xulkiisa ka caawiyay in ay booska 4-aad ka galaan koobka aduunka.
Ugu danbeyn ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa isaguna heshiis cusub oo ilaa 2023 ku heyn doona garoonka King Powe u saxiixay naadiga lagu naaneyso dawacoyinka ee Leicester ,kadib kooxo badan oo soo bandhigay xiisaha ay u qabaan gool dhaliyaha England.